နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: Android OS ဆိုတာဘာလဲ (What is Android ?)
Android OS ဆိုတာဘာလဲ (What is Android ?)
မြန်မာ Mobile Application မှာ Android နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေ ၊ Android နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေထင်ထားတော့
အခုမှ ဖုန်းအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့သူတွေ ၊ အခုမှဖုန်းစကိုင်သူတွေအနေနဲ့ Android ဆိုတာဘာလဲလို့သိချင်ကြမှာပါ။
ဒီတော့ Android ဆိုတာဘာလဲ နဲ့ Android ရဲ့အကြောင်းကို နားလည်လွယ်ဆုံးဖြစ်အောင် ရှင်းပြပါ့မယ်။
(အများ နားလည်လွယ်အောင်ရှင်းလင်းထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့် အမှားအယွင်းများ ၊ ကျန်ခဲ့သည်များရှိပါက ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ) Android ရဲ့အစပိုင်း
Android အကြောင်းကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ဆိုရင် Apple ရဲ့ iPhone အကြောင်းကိုပါထည့်သွင်းပြောရပါလိမ့်မယ်။ 2007 ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီး
Apple ရဲ့ iPhone ဟာ ကမ္ဘာမှာ ထိပ်တန်း နာမည်ကြီးဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ iPhone ရဲ့ ဖုန်းတွင်းစနစ်အနေနဲ့ Apple ကုမ္ပဏီရဲ့
ကိုယ်ပိုင် Mobile Device တွေအတွက် Operating System ဖြစ်တဲ့ iOS ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ ခြုံငုံပြောရရင်တော့အဲဒီကတည်းက
Internet ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Google ဟာ iOS ကိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်မယ့် Operating System တစ်ခုကို ထုတ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။
2007 ခုနှစ်မှာ Google ဟာ Android Operating System ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
Android OS ဟာ Linus Kernel ကိုအခြေခံထားပြီး Java platform ဖြင့်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Android OS တွေရဲ့ သမိုင်းမှာ
HTC ဖုန်းတွေဟာလည်း မပါမဖြစ်ပါပဲ။ Android OS ကိုစတင်ထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့တဲ့တဲ့ Android OS နဲ့စတင်ပူးပေါင်းခဲ့တဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းကုမ္ပဏီဟာ
HTC ကုမ္ပဏီဖြစ်လို့ပါပဲ။ ပထမဆုံး Android ဖုန်းက G1 ပါ ။ HTC dream လို့လဲခေါ်ပါတယ်။အိုင်ဖုန်း 2G ထွက်ပြီးတနှစ်ကျော်အကြာ ၂၀၀၈ ကုန်ခါးနီးလောက်မှာ realease လုပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ HTC ဟာ Android OS ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ဖုန်းတွေနဲ့ နာမည်ရလာခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသော Mobile ဖုန်းကုမ္ပဏီကြီးများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
2007 ခုနှစ်ထဲမှာတော့ Intel, LG, Marvell Technology Group, Motorola, Nvidia, Qualcomm, Samsung Electronics, Sprint Nextel, T-Mobile စတဲ့
နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာ Android Operating System နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ , Atheros Communications,
Asustek Computer Inc, Garmin Ltd, Huawei Technologies, PacketVideo, Softbank, Sony Ericsson, Toshiba Corporation နဲ့Vodafone
စတဲ့ မိုဘိုင်းနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေကလည်း Android OS နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Android Market ကိုစတင်တည်ထောင်ခြင်း
၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာတော့ Google ကုမ္ပဏီဟာ Apple ရဲ့iPhone တွေအတွက်တည်ထောင်ထားတဲ့ Mobile Application တွေရယူနိုင်တဲ့ iTunes စတိုးလိုမျိုး
Online Android Market ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။Android Market မှာတင်ထားတဲ့ Application တွေရဲ့ 57 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာ free ရယူနိုင်တဲ့ application တွေဖြစ်ပါတယ်။
၄နှစ်အတွင်းမှာ Google ကုမ္ပဏီဟာ Android OS ကို version အဆင့်မြှင့်ပြီး မွမ်းမံထုတ်လုပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ Android OS ဟာ free ပေးထားတဲ့ OS တစ်ခုဖြစ်ပြီး
Open Source ဖြစ်တာကြောင့် Android Developer မည်သူမဆို Android OS ကို ပြင်ဆင်ရေးခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကုမ္ပဏီက မူရင်းထုတ်ဝေထားတဲ့
Android OS version တွေကို အပြင်က Android Developer တွေက ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီး ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့
Android Custom OS(Custom ROM) တွေဟာလည်း အများအပြားထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းလောက်ကစပြီး Android OS ဟာ
တစ်ရှိန်ထိုးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလက်ရှိအချိန်ထိ ၂နှစ်ခွဲအတွင်း Android Market မှာ Android Developer တွေဖန်တီးရေးသားထားတဲ့ Android OS application
ပေါင်း သုံးသိန်းနှင့်အထက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ Apple ရဲ့ iTune စတိုးမှာ Apple Developer တွေ ၄ နှစ်စာတင်ထားတဲ့ Application တွေရဲ့ အရေအတွက်ရဲ့
နှစ်ဆ ရှိပါတယ်။ တဖြည်းတဖြည်းပိုမိုအောင်မြင်လာတဲ့ Android OS များ
အခုနောက်ပိုင်းမှာ Android စနစ်ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားတဲ့ Mobile ဖုန်းအနေနဲ့ဆိုရင် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် တန်ဖိုးနည်းဖုန်းတွေမှာတောင်
Android OS ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုထားလို့ Android OS ဖုန်းများဟာ လူကြိုက်များလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Apple ရဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းပြန်ပြောရပါဦးမယ်။
2010 ခုနှစ်မှာ Apple ကုမ္ပဏီဟာ iPad ကိုစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ iPad မှာအသုံးပြုထားတဲ့ OS ကလည်း iPhone တွေလိုပဲ iOS ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် iPad တွေအတွက် iOS ကTablet version ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ၂၀၁၁ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ Google ဟာ Android OS ကို ဖုန်းတွေအတွက်သာမက
Tablet တွေမှာအသုံးပြုနိုင်မယ့် Android OS ကိုအသုံးပြုနိင်မယ့် HoneyComb လို့အမည်ရတဲ့ Tablet တွေအတွက် Android version ကိုစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
version အနေနဲ့ပြောရင် 3.0 ကနေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလက်ရှိအချိန်အထိ Android Tablet version မှာ HoneyComb Version 3.2 အထိထွက်ရှိနေပါပြီ။
ဖုန်းတွေအတွက် Android OS အနေနဲ့ version 4.0 အထိထွက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Android OS ကဘာတွေပိုကောင်းလဲ ?
Android OS ကဘာတွေပိုကောင်းလဲလို့မေးရင် Mobile Device တွေအတွက် သုံးလို့အကောင်းဆုံး OS တစ်ခုလို့ပြောရရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး။
Android OS ကအထောက်အပံ့ပေးနိုင်တဲ့ကွန်ရက်တွေအနေနဲ့ GSM/EDGE, IDEN, CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth, Wi-Fi, LTE, NFC နဲ့ WiMAX
ကွန်ရက်တွေကို အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ Android OS ကို GSM ဖုန်းတွေသာမက CDMA ဖုန်းတွေမှာပါအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအတွက်လည်း GSM ရဲ့ EDGE ကွန်ရက်ရော CDMA ရဲ့ EVDO ကွန်ရက်ကိုရော Android OS နဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းရဲ့ Graphic ပိုင်းအတွက်လည်း 3D စနစ်ကိုပါအထောက်အပံပေးနိုင်အောင် မွမ်းမံထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ Android OS ကိုအသုံးပြုထားတဲ့
ဖုန်းHardware အမျိုးအစားကိုလိုက်ပြီး Multi Touch စနစ်ကိုလည်း အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
အခုနောက်ထွက်တဲ့ Android version 2.2 နှင့်အထက်ကစပြီး Google ရဲ့ Service တွေကို Voice Command ကိုအသုံးပြုပြီးရှာဖွေနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ Mobile ဖုန်းများအတွက်ထွက်ရှိပြီးသော Android OS version များ
အပေါ်မှာ Android OS version တွေအကြောင်းပြောခဲ့တော့ Android OS version ဘယ်နှစ်ခုထွက်ခဲ့ပြီးပြီလဲ ၊ OS version တွေရဲ့အမည်တွေကဘာတွေလဲဆိုတာ
ကိုလဲသိချင်ကြမှာပေါ့။ အောက်မှာ Android OSကိုအထောက်အပံပေးနိုင်တဲ့ ဖုန်းနဲ့ Tabletတွေအတွက်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့Android OS version တွေကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ Android version Operating System Name
3.x.x Honeycomb (For Android Tablet)
အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ထဲက 2.3.x တို့ 3.x.x တို့မှာဆိုရင် x ဆိုတဲ့နေရာမှာ 3,4,5,6,7 စသည်ဖြင့် version အမျိုးမျိုးရှိပါသေးတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် 2.3.3 တို့ 2.3.5 တို့လိုမျိုးပေါ့ဗျာ။
Android OS ဟာဘာကြောင့်အရမ်းအောင်မြင်လာခဲ့တာလဲ ?
Android OS အောင်မြင်လာတဲ့အချက်တွေထဲမှာ ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေအများအပြားအသုံးပြုလာတယ်ဆိုတဲ့တစ်ချက်ထဲတင်မဟုတ်သေးပါဘူး။
အသုံးပြုသူများအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ ထင်ရှားတဲ့အချက်အနေနဲ့ဆိုရင် ဈေးကြီးတဲ့ iPhone ပေါ်မှာသာသုံးနိုင်တဲ့ application တွေ ၊
game တွေဟာ Android OS အတွက်လည်း ရှိနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် Android OS ကိုထည့်သွင်းထားတဲ့ တန်ဖိုးနည်းတဲ့ ဖုန်းတွေမှာတောင်မှ
iPhone ထဲက နာမည်ကြီး application တွေ game တွေကိုဆော့ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းတွေရဲ့ Hardware ကွာခြားချက်တော့ရှိတာပေါ့ဗျာ။
နောက်ပြီး အင်တာနက်သုံးစွဲရမှာလည်း Android OS က ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ကြည့်ရှုနိုင်စေပါတယ်။ ဖုန်းတွင်းစနစ်အသုံးပြုရလွယ်ကူပါတယ်။
အသစ်ထွက် Android Version များကို အလွယ်တကူမြှင့်နိုင်ပါတယ်(ယေဘုယျအားဖြင့်) ။ ဒီအချက်တွေကပဲ Android OS ကိုအဓိကအောင်မြင်စေ
ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို Mobile ဖုန်းဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ ၊ developer များ ၊ဝေဖန်သူများက တစ်ညီတစ်ညွှတ်တည်းထောက်ခံထားကြပါတယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီးရော Android OS ဟာဆက်လက်အောင်မြင်ဦးမှာလား ??
အဲလိုမေးလာရင်တော့ အောင်မြင်ဦးမှာပါလို့ ပြောရမှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Android OS ဟာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ Operating System ဖြစ်ပါတယ်။
Java ကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့ Java Programmer တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် Android application တွေရေးဖို့အတွက် ဘာမှကိုမခက်ခဲတော့ပါဘူး။
ထူးထူးခြားခြား application တွေရော ၊ သုံးလို့ကောင်းတဲ့ application တော်တော်များများ Android OS အတွက်ရှိနေပါပြီ။ ယေဘုယျအားဖြင့် Android OS အတွက် ရေးသားထားတဲ့ Application ဒါမှမဟုတ်
ဂိမ်းတစ်ခုဟာ Android စနစ်ကို အသုံးပြုထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေအားလုံးမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် တန်ဖိုးနည်း မိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေမှာတောင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ Android OS ဟာ
ဆက်လက် ပိုမိုအောင်မြင်ဦးမှာကို ပြောစရာကိုမလိုတော့ပါဘူး။
ဒီလောက်ဆိုရင် Myanmar Mobile Application မှ Mobile User များလည်း Android OS ရဲ့အကြောင်းကို သိရှိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လက်လှမ်းမှီသလောက် ကိုနားလည်လွယ်အောင်ရှင်းပြထားပါတယ်။
ကျန်ခဲ့တဲ့အချက် ၊ အမှားအယွင်းအနည်းငယ်ရှိရင်လဲခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by Hajee Than Hla Oo at 2:39 PM